ကျောက်စိမ်းထွင်းထုသည့်နည်းစနစ်အမျိုးမျိုး - MICConD စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ကျောက်စိမ်းထွင်းထု၏အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-11-28 မူလ:ဆိုက်ကို
ကျောက်စိမ်း၏ခိုင်မာမှုသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ထွင်းထားရန်ခက်ခဲသည်Rotary Wood tool ကို။ ညADE သည်ထိတွေ့ခြင်း, ကြိတ်ခြင်း, ကြိတ်ခြင်း, ကြိတ်ခြင်း, ကြိတ်ခြင်း, တူးခြင်းနှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကိုဖြည့်စွက်ရန်။ လှပသောကျောက်စိမ်းထွင်းထုခြင်း, အနုပညာရှင်မည်မျှအလုပ်ပေးမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
legraving line - အပျက်သဘောဆောင်သောလိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အပြိုင်နှစ်ဆအပျက်သဘောဆောင်သောလိုင်းနှစ်ခုနှင့်တပြိုင်တည်းမျဉ်းကြောင်းအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည့်ကျောက်စိမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထွင်းထုထားသည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ rocary tool ကို။ ဟန်မင်းဆက်မတိုင်မီအတိုများကတိုတောင်းသောလိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလိုင်းအများစုမှာရေတိမ်ပိုင်းများဖြစ်သည်။ သူတို့ကျိုးပဲ့နေရင်သူတို့ကအလေးမလှည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။
Hidden Repr> လိုင်း၏အကြမ်းဖျင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းမျက်နှာပြင်ကိုအနည်းငယ်လျှော့ချရန်အနည်းငယ်လျှော့ချပြီး Hongshan ယဉ်ကျေးမှု၏မွေးရာပါထိတွေ့မှုအစွန်းသည်သိသာထင်ရှားသည်။
မြင့်မားသောကယ်ဆယ်ရေး:Dအောက်ခြေမျက်နှာပြင် iggingနှင့်Rotary tool ကိုချိန်ညှိ ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ပုံဖော်သောသုံးရှုထောင့်ပုံရိပ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်ထက်တတ်သောလိုင်းများ။ ၎င်းကိုစစ်ပွဲများကာလတွင်စတင်ခဲ့ပြီး Ming နှင့် Qing မင်းဆက်များတွင်လူကြိုက်များလာသည်။
ပတ်ပတ်လည်ထွင်းထု:မကြာခဏ t ကို carve ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်hree-dimensional ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ရပ်နေသည့်တိရိစ္ဆာန်များစသည်တို့သည်မကြာခဏဟိုက်ဟံတော်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် Shang Deviny ၏ကျောက်စိမ်းဆောင်းပါးများတွင်တွေ့ရသည်။
Bas- ကယ်ဆယ်ရေးသစ်သားပန်းပေြာက်- မြေယာလျှော့ချရေးအားဖြင့်, လိုင်းများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံအောက်လိုင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖြတ်တောက်သည်ဖြင့်Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို, လိုင်းအလှဆင်၏မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့။ Liangzhu ယဉ်ကျေးမှု၏ကျောက်စိမ်း၏မျက်နှာ, ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းသည်ကျောက်စိမ်းနှင့်နှာခေါင်းဖြစ်သည်အခြေခံကယ်ဆယ်ရေးစခန်းပန်းသူတောင်းကမ်းစရာ.
ရွှေ့ပြောင်းရသည့်လက်စွပ်Tသူသည်ကျောက်စိမ်းပစ္စည်းများကိုချိတ်ဆက်နိုင်သောမြည်သံကြိုးများထဲသို့ဖြတ်သန်းသည်ဖြင့်Rotary Saw Tools Boxကျောက်စိမ်း၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့နိုင်ပြီးနွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီ မှစ. အသုံးပြုသည်။
အခေါင်းရှိသောထွင်းထု:ALiangzhu ယဉ်ကျေးမှုတွင်ကျောက်စိမ်းပေါက်သရဖူအလှဆင်တွင်ပထမဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရသောဖောက်ထွင်းမှု၏အခြေခံဖြင့်တီထွင်ခဲ့သောပွင့်လင်းမြင်သာသောထွင်းထုမှုဟုလူသိများသည်။ ဆွန်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထွင်းထုခြင်းသည်အဆင်တန်ဆာဆင်နံပါတ်များကိုတန်းတူညီမျှနေရာများရှိပိုက်များနှင့်တွင်းများကိုလေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်သည်နှင့်Rotary Hammer DrillGroove လိုင်းများကိုဖွဲ့စည်းရန်လှူဒါန်းရန်ဝါယာကြိုးဖြင့်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ Shang Dynasty တွင် Hollophed အပိုင်းသည်အလွန်ချောမွေ့ပြီး၎င်းသည်နည်းပညာကိုပြသခဲ့သည်ဆန့ ်.အလွန်လိမ္မာပါးနပ်ခဲ့သည်။ ယွမ်မင်းဆက်ရှိထွင်းထုသည့်နည်းစနစ်တွင်တိုးတက်မှုအသစ်တစ်ခုရှိသည်။ ထွင်းထုထားသောကျောက်စိမ်း Lotus Reed အရွက်များသည်အလွန်ထူးခြားစွာပွင့်လင်းမြင်သာသောအလွှာသုံးလေးသို့မဟုတ်လေးခုရှိသည်။
ပန်းများအောက်တွင်ဖောင်းကြွခြင်း - ၎င်းကို multi-layer transparent ထွင်းထုခြင်းမှပြုလုပ်သည်။ Jade angenty သည် Semi-Relides မှ ဖြတ်. နဂါးပုံစံသို့မဟုတ်ပန်းများနှင့်ပန်းများနှင့်ပန်းများနှင့်အပင်များကိုပိတ်ထားသည်။tungsten carbide rotary burr ဖြတ်တောက်မှုကိရိယာများသတ်မှတ်ထားသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ, ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အတူနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးအလှဆင်မျက်နှာပြင်များဖွဲ့စည်းခြင်း။
ဖောင်ဒေးရှင်းမှ - Shoveling ပြီးနောက်ရေယာဉ်များ၏မျက်နှာပြင်များနှင့်နံရံများကိုရှေးခေတ်ပြည်သူလူထုကသန့်စင်ပြီးအဆင်တန်ဆာအုတ်မြစ်မကုန်ကျ,ဖြင့်Mini Rotary Grinderဒါကြောင့်အလွန်ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း: မြင့်မားသောစည်ကျောက်စိမ်း Liangzhu ယဉ်ကျေးမှုမှာ tunneling ၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်မှုပြသခဲ့သည်။ Qing မင်းဆက်ရှိဖောင်းပွပ်ပလတ်စတစ်သည်ပါးလွှာသောနံရံများဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ဤနည်းစနစ်ကိုပိုမိုကျွမ်းကျင်စေသည်။
Polishing: ဒါဟာကြမ်းတမ်းပြီးသန့်ရှင်းရေးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ကွဲပြားခြားနားသောနှင့်အတူminateure ထောင့်ကြိတ်စက်s။ တိုက်ပွဲဝင်သည့်အခြေအနေများအပြီးကျောက်စိမ်းဆောင်းပါးများသည်နောက်ဆုံး polishing ဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်အာရုံစိုက်စေပြီးကျောက်စိမ်းထွင်းထုထားသည့်ကျောက်စိမ်းနှင့်စိုစွတ်သောဖန်ခွက်တောက်ပမှုကိုအပြည့်အဝပြသနိုင်ရန်နှင့်ထင်ဟပ်နိုင်သည်။
Silhouette - ထွင်းထုထားသောကိန်းဂဏန်းများသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များသည်စက္ကူဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်း,
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်ပုံမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါစေသင့်လျော်သောရွေးချယ်သင့်သည်အိတ်ဆောင် Power Hobby Rotary Tools Kitကြီးစွာသောအလုပ်အတွက်, သင်ထွင်းထုသူကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါက, သင်သည် Mibond ထံမှအကြံဥာဏ်တောင်းခံနိုင်သည်။
လျှပ်စစ် Mini Grinder OEM ဝန်ဆောင်မှု လျှပ်စစ် rotary tools များ လျှပ်စစ် rotary tool ကို kit လျှပ်စစ်အသေးစားလေ့ကျင့်ခန်း DIY လျှပ်စစ်ကိရိယာ Rotary Hammer Drill လက်သည်းခြေသည်းကြိတ်စက်ကြေးနန်းစက် rotary tool ကို polishing minateure ထောင့်ကြိတ်စက် အိတ်ဆောင် Power Hobby Rotary Tools Kit